Wolfgang Wodarg bụ dọkịta German na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka SPD. Dị ka Onye isi oche nke nzuko omeiwu nke Kọmitii Ahụike nke Council nke Europe, Wodarg bịanyere aka na mkpebi nke chọrọ na Disemba 18, 2009, nke a tụlere na mkparịta ụka mberede na Jenụwarị 2010. Ọ kpọkwara oku ka eme nchọpụta banyere ebubo na-akwadoghị mmetụta […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 March 2020	• 18 Comments
Fewbọchị ole na ole gara aga ajuju ajuju banyere ọrịa ahụ na-efe efe nke Coronavirus. Gịnị ka m kwesịrị ime? Kedụ ka m ga - esi merie usoro niile? Nkwadebe dị a makeaa ka m na-eme maka ihe ọ bụla na-abịa? Enwere m ozi ọma. Ozi ọma ahụ bụ na o doro anya na ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta na a na-egwu ha […]
Minista Bijleveld ndị agha dị njikere na mgbakwunye "ebe mkpọchi" yana iji dozie udo na nsogbu Coronavirus, melite: nkwado ngwugwu ọtụtụ iri ijeri
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 17 March 2020	• 17 Comments
Minista Ank Bijleveld ka kwuputara na Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa (nke na-ada ka nke ọma karịa 'ndị agha') adịla njikere ịtọ ebe nnabata, ụlọ ọgwụ mberede na ebe a na-anabataghị ọnọdụ na iji nwee ike. Ọ bụghị iwu na ị ga-akpọ m clairvoyant, n'ihi na ị ga - buru amụma nke a, mana ihe niile na - abịa, m […]
"Lezienụ anya na ibe unu", ihe mgbochi otu, ngwa coronavirus OLVG yana otu esi akwụsị ọgbụgba a?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 17 March 2020	• 11 Comments
"Lezienụ onwe unu anya" bụ mantra ọhụrụ anyị hụrụ nke Mark Rutte & Co nke politburo bidoro n'oge awa iri abụọ na anọ gara aga. Nke ahụ “lebara ibe unu anya ntakịrị” ka ji nwayọ nwayọ wee na-ada nke ọma, ọ bụrụ na a na-akpọku gị ka ị na-elekọta ibe gị, mana nke ahụ bụzi […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 March 2020	• 14 Comments
Okwu coronavirus nke Mark Rutte na TV dị oke mma maka ndị niile hụrụ ndị ọbịa ụbọchị nke Prince, ndị hụrụ ige ntị n’ocheeze okwu anya, na ụgbọ ịnyịnya ma ọ bụ ọkọlọtọ na-efefe n’ụzọ iji chọta Maxima. Anyị na-ekwu maka ndị na-achọ ile anya. Ndi mmadu […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 March 2020	• 8 Comments
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Agara m gbadaa n'okporo ụzọ ma kpọọkwa ndị nwere ọnụ na-ekwu okwu na ha chere na m chịrị ọchị nke ukwuu (enwere m fever fever). Ha jụrụ m ihe kpatara na anaghị ete m nkpuchi. N'ebe ndị na-eche nche, nke dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'okporo ụzọ abụọ ọ bụla, onye agha America kwụsịrị m. […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 March 2020	• 17 Comments
Ana m atụ anya na anyị ga-ahụ "iwu agha" (ma ọ bụ "ọnọdụ mberede" mkpọchi) kpọsara n'izu a. Enwere ohere na a ga-eme nke a n'okpuru EU. Nke a pụtara na onye ọ bụla nọ na Europe niile ga-anọrịrị, anyị ga-ahụ ebe ndị agha na-enyocha ndị mmadụ na onye ọ bụla na-eyighị ihe nkpuchi ma na-enweghị ikike ka […]
Mkparịta ụka na-elekọta mmadụ: ngwá ọrụ iji nabata usoro mgbochi iche iche nke stero?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 March 2020	• 5 Comments
N'ụtụtụ a, mụ na onye Dutch m bi na Bali na-enwe mkparịta ụka Facebook. Ọ gbagoro akụkọ na mbụ na-egbu m ọchị. Ka m na-a coffeeụ kọfị, ana m ahapụ ka ọ maba ruo nwa oge ma achọrọ m ọnụọgụ ọnya ọnya na Bali. Nke ahụ mechara bụrụ 1. Na […]
Tom Hanks na nwunye ya nwere coronavirus (ihe nkiri Inferno nke na-egbu Tom Hanks: nje mmadụ mere)
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 March 2020	• 22 Comments
Tom Hanks na nwunye ya nwere nje Corona. Oh, chere obere oge. Ha bụ ndị na-eme ihe nkiri, yabụ ha nwekwara ike ịkpọ ya iji nyere aka kwusi hype. N'ihi na anyị ga-agarịrị na usoro ọchịchị aka ike na mkpuchi nke 'kwarantaini'. Ihe nkiri Inferno ya na Tom Hanks bụ ihe gbasara mmadụ mere. Udua? Corona bu ihe zuru oke […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 March 2020	• 18 Comments
Nkọwa nke 'hoax' bụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ebute ụzọ n'ịdabere n'ihe n'ihe ndị dị elu ma debe ya n'ọnọdụ niile. 'Ọrụ ọkọlọtọ ụgha' bụ mgbe obodo ma ọ bụ nkwekọrịta onwe ya bụ ihe kpatara nsogbu ma tinye ya na akpụkpọ ụkwụ ndị iro. Bụ Coronavirus […]
"Previous page - Peeji nke ọzọ »
Nleta nile: 1.237.555